ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၄၁ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၄၁
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၄၁
Baby.. I'm from New York
Now you're in New York..... ( Alicia Keys- New York )
♥ ♥ အချစ်ရေ ....ငါကလေ
အိပ်မက်များစွာကို ထုဆစ်ကြတဲ့ .... ကွန်ကရစ် တောအုပ် ကြီး ရှိရာ
နယူးယောက် မြို့ကြီး ဆီကပါ ကွယ်
အဲဒီမှာလေ .. နင် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ..... ဘာမှ မရှိဘူး
အခု.. နင်က အဲဒီ . နယူးယောက် မှာ ♥♥
.... အဆိုတော် အလီရှာကီးစ် ရဲ့ -နယူးယောက် ဆိုတဲ့ ...သီချင်း လေးနဲ့ အဲဒီ အမဲမချောချောလေး ကို ခုရက်ထဲ အတော် သတိရနေမိသား ။ အဲဒီသီချင်းလေးက ၂၀၁၅ တဝိုက်မှာ အတော် ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ်ပေါ့ ။ အလီရှာ လဲ အဲဒီသီချင်းနဲ့ အတော်နံမည်ကြီးတယ်။သူ့မွေးရာဇာတိ မြို့ကြီးအကြောင်း ကို သူ တော်တော်ဂုဏ်ယူသီဆိုခဲ့တာမျိုး (တကူးတက ရောက်ဖို့ မလွယ်တဲ့ အာရှဖက်က မြန်မာတွေ အတွက် နယူးယောက် မြို့ကြီးဟာ စိမ်းကောင်းစိမ်းမယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည် တနံတလျှား လူငယ်လူလတ်များစွာရဲ့ လျှာထိုးဦးထုတ်တွေ မှာ New York မြို့ ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်- N နဲ့ Y စာလုံး ၂ခု- တခုကိုတခု ထပ်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းက အတော် ထင်ရှား- လူကြိုက်များလှတယ် )
အခု သတိရနေတဲ့ အကြောင်း က ဒီ ကိုဗစ်ကာလဆိုးကြီးထဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူအသေဆုံးဖြစ်ရတဲ့ နယူးယောက်မြို့ကြီးထဲက မြို့ကြီးသူ အဆိုတော်မလေး အလီရှာကီးစ် တယောက် ဘယ်လို အနုပညာမျိုး-စျန် မျိုးနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်နေမလဲ ။ သူ ဂုဏ်ယူ ဝင့်ကြွားသီဆိုခဲ့တုန်း- -သူ့သီချင်းထဲမှာ ပါသလို ဘယ်တော့မှ ကာဖျူး မရှိဘူး ဆိုတဲ့ သူ့ မြို့ကြီး - မိန်းမတွေ အရမ်း အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သူ့မြို့ကြီး- ခေတ်မှီရောင်စုံမီးတွေတဖြတ်ဖြတ် နဲ့ ထာဝရအသက်ရှင်နေခဲ့တဲ့ သူ့ မြို့တော်ကြီးဟာ အခုတော့တစ္ဆေတွေ နေတဲ့ မြို့လို အသက်မဲ့စွာ ငြိမ်သက်ခြောက်ကပ်လို့ -လော့ဒေါင်းကျခဲ့တာ ၂လကျော်တောင် ရှိလို့နေခဲ့ ပြီ ။ မြို့သားတွေ အလုပ်ကို သွားခွင့် -အလုပ် လုပ်ခွင့် မရကြတော့ ဘူး။ အိမ်ထဲမှာပဲ အသုဘသတင်းတွေကို နေ့စဥ်ရက်ဆက် နားစွင့်နေကြရတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကံအဆိုးဆုံး မြို့ကြီးပေါ့ ။ ဗိုင်းယပ်စ် ပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့ လူ ၃သိန်းခွဲ ရယ် - သေဆုံးသွားရတဲ့ မြို့သား ၂သောင်း ၆ထောင်ကျော် ထဲမှာ အလီရှာ့ မိတ်ဆွေတွေ-သူ့ ဆွေမျိုးတွေ ဘယ်လောက်ပါသွားပြီလဲ- သေသူ အများစု လူမဲတွေ ဖြစ်နေတာမျိုးကို သူ ဘယ်လို ခံစားနားလည် မလဲ ။ သူ ဘယ်လို ဝမ်းပမ်းတနဲ ဖြစ် နေမလဲ။ နောင်တချိန် နယူးယောက်မြို့လည်ခေါင် Time Square မှာ သူ့-ဂီတမိတ်ဆွေ ဂျေဇက်တို့လို အမဲတွေနဲ့ အတူ စင်ပေါ်တက် ပြန်ဖြေဖျော် သီဆိုခွင့်ရခဲ့ ရင် ဒီသီချင်းကို သူ ဘယ်လို ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် မျက်ရည်တွေ နဲ့ ပြန်ဆိုလေမလဲ ငါကြိုသိချင်နေလိုက်တာ။
လော့ဒေါင်းချထားတဲ့ သူ့ပြည်နယ်ကြီးတခုလုံးကို ပြန်ဖွင့်ပေးဘို့ သူ့ ပြည်နယ်သား လုပ်ငန်းရှင်တွေ အလုပ်သမားတွေ - ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုတောင်းဆိုနေကြပေမယ့် နယူးယောက်ပြည်နယ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ကြီး အင်ဒရူး ကိုမိုက လုံးဝ အလျော့မပေးပါဘူး။ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကတည်းက ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပဲ ကိုယ် နေကြဘို့ ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ သူ အမိန့်ကို လာမယ့် ဇွန်လ ၆ရက်နေ့အထိ ထပ် ပြီး တိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ ၂လ ခွဲကြာမယ့် သဘော။ လူသေနှုန်းတွေက ပြန် ကျလာပြီဆို ပေမယ့် အခုထိ လူသေထုတ်တဲ့ အိတ် တွေ တရက်ကို အိတ် ၂၀၀ လို တုန်း။ အသေများခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေတုန်းက ဆို တရက်ထဲအလောင်း ၇၀၀ ကျော်တာမို့ ရေခဲတိုက်တွေ မှာ အလောင်းထားစရာ နေရာမရှိတော့ပဲ -ယာယီ ရွက်ဖျင်တဲတွေ ထိုးပြီး အလောင်းတွေကို ရေခဲရိုက် ထားရတယ် ။ ရေခဲရိုက်ကားရှည်ကြီးတွေပေါ်တင်ထားရတယ်။ ကျင်းအရှည်ကြီးတွေ တူး-အခေါင်းတွေ ကပ်လျက် စီထပ်ပြီး -ယာယီမြုပ်ကြရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ တာပေါ့ ။
ဘယ်အချိန်မှာ နယူးယောက်မြို့သား တွေကို လမ်းပေါ်ပြန်ထွက်ခွင့်ပေးမလဲ ။ အောက်က အချက်တွေ ပြည့်စုံကြပြီလား ။
ပြည်နယ် မြို့နယ် အသီးသီးက ဆေးရုံ တွေမှာ လူနာရောက်နှုန်း ၁၄ ရက် ကြာအောင် ဆက်တိုက် ကျဆင်းနေပြီလား ။ ၃ရက် တကြိမ်တွက်တဲ့ ပျှမ်းမျှ လူသေနှုန်းတွေ ကော ကျ လာပြီလား ။
မြို့နယ်အသီးသီးမှာ လူနာတွေ ရုတ်တရက် များပြား လာရင် ပြုစု ကုသ စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ ။ ဆေးရုံတွေမှာကုတင်နေရာလွတ် ၊ အသည်းအသန်ကြပ်မတ်ကုသခန်းတွေမှာ ကုတင် နေရာလွတ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှိနေနိုင် ပြီလား။ လူနာအသစ် တွေ ကို လက်ခံ ကုသနိုင်စွမ်း အဆင်သင့် ရှိနိုင် ပြီလား ။
မြို့နယ်တိုင်းမှာ လူဦးရေ တထောင်ရှိတိုင်း ကိုဗစ် ရှိမရှိ လူ ၃၀ စာ ကို တလတခါ စစ်ဆေးပေးတဲ့ ကိစ္စ - နိုင်အောင် စစ်ဆေး ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပြီလား ။
မြို့နယ်တွေမှာ လူတသိန်းရှိတိုင်း ပေါ့စတစ် ရောဂါသည် လူ ၃၀ ရဲ့ ကူးစက် ရောဂါ -ရာဇဝင် ဇစ်မြစ် - သူတို့က တဆင့် ပျံ့ ကူးစက်နိုင်သူများတွေ ကို ခြေရာခံ နိုင်စွမ်း ရှိပြီလား။
အဲဒါတွေပြည့်စုံနေမှ လူတွေ အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့်ရမယ်လို့ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးက အမိန့်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အလုပ်ခွင် ပြန်ဝင်ကြဘို့ ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ တယောက်နဲ့ တယောက် လုံလောက်တဲ့ အကွာအဝေး ရှိဘို့ လိုမယ်။ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ထားကြဘို့ လိုမယ်။ CDC ( Centre of disease control and prevention ) က လမ်းညွှန်ချက် နဲ့ ပြည့်စုံလို့ သက်ဆိုင်ရာက စစ်ဆေးလို့ ဖွင့်ခွင့်ရပြီဆိုရင် အလုပ်တွေကို အဆင့် ၄ဆင့် ထားပြီး တရစ်ချင်း ပြန် ဖွင့်ပေးမယ်။
ပထမအဆင့်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ။ ဒုတိယ အဆင့်မှာ အသက်မွေး အတတ်ပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ။ လက်လီရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်း တွေ- အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွေ ။ တတိယ ဆင့်မှာ စားသောက်ဆိုင်တွေ အစားအသောက် ရောင်းချမှုတွေ ဟော်တယ်-တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းတွေ ။ နောက်ဆုံးတဆင့်က အနုပညာလုပ်ငန်း ဖြေဖျော်ရေးလုပ်ငန်း-နဲ့ အပန်းဖြေ-ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ လုပ်ငန်းများ
( When plans are approved, businesses will go back in four phases, with construction and manufacturing first, followed by professional services, retail and real estate, then restaurants, food services and accommodation.The last phase would involve the arts, entertainment and recreation businesses )
တကယ်လို့ ကူးစက်တာတွေ ပြန်များလာတာနဲ့ ချက်ချင်း အကုန်ပြန်ပိတ်သိမ်းရမယ်။
အီတလီဟာ ဥရောပမှာ အကြာမြင့်ဆုံး ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ရတဲ့ တိုင်းပြည် ။ ၉ ပတ်ကြာ ပိတ်ဆို့ပြီး မေ ၄ရက်နေ့က တိုင်းပြည် အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာထားတာကို ရုတ်သိမ်းတယ်။ ပန်းခြံတွေ ပြန်ဖွင့်တယ်။ ဆိုင်လေးတွေ အစမ်းဖွင့်ခွင့်ပြုတယ်။ ပီဇာ ဆိုင်တွေ ဖွင့်ခွင့်ရပေမယ့် ဆိုင်မှာ ထိုင်စားခွင့် မရ၊ ပါဆယ် ( Take Away ) ဆွဲ ခွင့် ပြုတဲ့ အဆင့်နဲ့ စမ်းသတ်နေကြဆဲ ။ အသုဘ ကို လူ ၁၅ ဦး အထိတက်ရောက်ခွင့်ပြုပေမယ့် နှာခေါင်းစည်း ကြရပါမယ် ။ တိုင်းပြည်မှာ မူးယစ်ဆေးအမှုနဲ့ ခိုးမှုတွေ သိသိသာသာ ပြန်တက်တယ်။
ပေါ်တူဂီမှာ လဲ ဖြေလျော့မှုတွေ စပြီး -လူတွေ အပြင်ထွက်လာ လို့ နှာခေါင်းစည်းမပါရင်တော့ ယူရို ၃၅၀ ဒဏ်ချပါမယ်။
စပိန်မှာ ဆံသဆိုင်တွေ အစမ်းဖွင့်ပါတယ်။နှာခေါင်းစည်း မျက်နှာကာတွေနဲ့ အတော် အဆင်မပြေလှတဲ့ လူတို့ ရှင်သန်ရုန်းကန်ရမှုတမျိုးပါ ။ မဲဒရစ် ဒေသ လူထုကျန်းမာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ယိုလန်ဒါ The director of public health for the Madrid region, Yolanda Fuentes, က နှုတ်ထွက်တယ်။ စပိန်က အထိအနာဆုံးနေရာကို ဖြေလျော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အရက်ဆိုင်တွေကို ဖွင့်ခွင့် ပေးလို့ ။
ဂျာမဏီ မှာလဲ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေ ဖွင့်လို့ရပေမယ့် ကြိုတင် ချိန်းချက်ထားသူများ( appointment only ) ကိုသာ လက်ခံ ညှပ်ပေးဘို့ခွင့်ပြုထားပါသေးတယ်။
ပြင်သစ် မှာလဲ လူတွေ အပြင်ထွက်ခွင့်ရကြပြီ။ဒါပေမယ့် အနီရောင်နယ်မြေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပဲရစ်နဲ့ သူ့နားက ဒေသ ၄ခု က လူထုပန်းခြံတွေ ကိုတော့ ပိတ်ထားတုန်းပဲ ။ ဘူတာရုံတွေမှာ လူ တယောက်နဲ့ တယောက် ရပ်နေရမယ့် အကွာအဝေးတွေကို ကြမ်းပြင်တွေပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းဝိုင်း ပေး ပြီး အမှတ်အသားပြုပေးထားတာ တွေ့ရတယ်။တယောက်နဲ့တယောက် ခွါခွါ ရပ်ကြဖို့ ပေါ့ ။
အခု ကိုဗစ်က စပိန် အီတလီ ဂျာမဏီ အင်္ဂလန် စတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ ကို မွှေလို့ အားရ သွား လို့ တူရကီနဲ့ ရုရှားဖက် ကို ဦးလှည့် တိုက်ခိုက်လာတဲ့ အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်။ တူရကီ နဲ့ ရုရှားက ကူးစက်နှုန်း- သေနှုန်းတွေ တရိပ်ရိပ် တက်နေပါတယ်။
အင်္ဂလန်မှာ ဆေးရုံကို ကိုဗစ်လူနာ တွေ ရောက်လာတဲ့ နှုန်းကျလာပြီမို့ အရေးပေါ်ဖွင့်ခဲ့ရတဲ့ လန်ဒန်က ကုတင် ၄၀၀၀ ဆန့် နိုက်တင်ဂေး ဆေးရုံကြီး ကို ပြန်ပိတ်ပြီး အသင့်အနေအထားမှာပဲ ထားလိုက်နိုင် ပါပြီ။ လုပ်ငန်းငယ်တွေ ပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား တခုကို ပေါင် ၅သောင်း အစိုးရက ထုတ်ချေးပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်ပတ်နိုင်ဘို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ သောင်းနဲ့ချီပြီး လျှောက်ကြတယ်။
အလုပ်တွေ ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးတော့မှာ ဆိုပေမယ့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ လူချင်းခွါရမယ့်ကိစ္စတွေ က မလွယ်လှပါဘူး။အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားကို PPE လိုသလို ထောက်ပန့်ဘို့ မလွယ်။ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ထုတ်ပိုးတဲ့နေရာမှာ လူအင်အားနဲ့ လုပ်ရတာမို့ လူချင်းခွါပြီး အလုပ် လုပ်ဖို့ ကိစ္စမျိုးက ပြောသလောက်မလွယ်။ ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာ လူချင်းခွါထိုင်ဖို့ မလွယ်။ အလုပ်ကို စက်ဘီးနဲ့သွားဘို့ -ခြေလျင်လျှောက်သွား ဖို့ မလွယ်။ လေယာဥ်တွေမှာ လူချင်းခွါဖို့-အလယ်ထိုင်ခုံတွေ ဖြုတ်ပေးဘို့ ကိစ္စ မလွယ်။ ဟီးသရိုးလေဆိပ်ကြီးမှာ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း အလုပ်မလည်ပတ်နိုင်။ နိုင်ငံခြားက ဝင်လာမယ့်လူတွေက ရောက်လာရင် ကိုယ် တည်းမယ့် အိမ်မှာ ၁၄ ရက် အရင် ဘယ်မှ မသွားပဲ နေပေးရဦးမယ်။
ကျောင်းတွေကို ဇွန်လထဲလောက်မှာ ပထမတန်းနဲ့ ၆ တန်း ကို အရင်အစမ်းဖွင့်ကြည့်ဘို့ စီစဥ်နေပါတယ်။ မိဘတချို့ကလဲ စိတ်ပူတယ်။ ဆရာများ သမဂ္ဂကလဲ သိတ် သဘောမကျသလိုလို အင်တာဗျူးတာတွေ့တယ်။
ဗြိတိန်က ဝိုက် ဆို တဲ့ ကျွန်းလေး ( Isle of Wight ) မှာ လက်ကိုင် ဖုန်းကတဆင့် ခြေရာခံတဲ့ အလုပ်ကို စမ်းသတ်လုပ်ကိုင်နေ တယ်။ လက်ကိုင် ဖုန်းထဲ ကို အပလီကေးရှင်းလေးတခု ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အခါ ရောဂါရှိသူ နဲ့ထိစပ်မိ တာနဲ့ သတိပေးတာမျိုး- အစိုးရက သိနေတာမျိုး ပေါ့။ ဒါက လူထု အတွက် ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်ထိမ်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာဥပဒေကို ချိုးဖေါက်နေတာမျိုး ဟုတ်မဟုတ် စိစစ် အတည်ပြုရဦးမယ့် အနေအထားရှိသေးတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုတွေက ဝေဖန်တယ် ။
ကိုဗစ် ပေးတဲ့ ဒုက္ခက လူထုဖက်က မလွယ်သလို အစိုးရဖက်ကလဲ မချောင်။ ကုမ္ပဏီ ၈ သိန်းရဲ့ အလုပ်တွေကို ရပ်ဆိုင်း အနားပေးထားရတဲ့အတွက် အလုပ်သမား ၇သန်းခွဲလောက် နားနေရတာကို အစိုးရက လစဥ် ကုန်ကျစားရိတ်ကျခံနေရတာ။ မေလဆန်းအထိ အစိုးရ ကုန်ကျစားရိတ် တလ-တလ ကို ပေါင် ၈ ဘီလီယံရှိတယ်။ အဲဒါကို အခု အောက်တိုဘာလ အထိ ဆက်တိုးမယ်ထောက်ပန့်မယ်လို့ ဗြိတိန်အစိုးရက ပြောတယ်။ လူအသေများထားတော့ အစိုးရက လော့ဒေါင်းဖြေရမှာကို အထူးသတိထားနေတဲ့ ပုံပေါက်သလို တဖက်က ကုန်ကျစားရိတ် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ကိုလဲ သတိထားမိနေပုံ ရပါတယ်။
အစိုးရက သြဂုတ်လက စပြီး အခုထောက်ပန့်တဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်ကို အလုပ်ရှင် တွေဘက်ကလဲ တစိတ်တပိုင်း ထည့်ဝင်ဘို့ စကား စလာတယ်။ အလုပ်သမားတွေကလဲ အလုပ်ကို တချို့စတင် သွားနေကြပေမယ့် သိတ် အဆင်ပြေလှတယ်မဟုတ်။ အထူးသဖြင့် လန်ဒန်လို့ မြေအောက်ရထားအားကိုးရတဲ့ နေရာမှာ ရထားကြပ်တာကို ရှောင်မရ။ တချို့က နှာခေါင်းစည်း မပါကြဘူး ။နှာခေါင်းစည်းကို မယုံဘူး။
ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ဦးဆောင်တဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံများရဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေး ကိစ္စ ကတော့ အခု ရံပုံငွေ ၈ဘီလီယံ ထူထောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ တောင်ကိုရီးယား မှာတော့ စာသင်ကျောင်းတချို့ ပြန်ဖွင့်ပြီ။ စာသင်ခန်းတွေ မှာ ပိုးသတ်ဆေးအရင် သေချာဖြန်းကြတယ်။ ဘုရားကျောင်းတွေတက်လို့ ရပြီ။ လူခြင်း ခွါပြီး ဝတ်ပြုကြဖို့တော့လိုတာပေါ့။ဂျပန်က မေလကုန်အထိ အရေးပေါ်အခြေအနေကို မရုတ်ဘူး ။
အာဖရိကမှာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား တောင်အာဖရိကနဲ့ ကင်မရွန်းတို့ ဟာ အန္တရာယ်များတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ ထဲမှာ ပါတယ်။ သေချာထိန်းချုပ်မှု လုပ်တာတွေကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်တာတွေ မလုပ်ရင် လူ တသိန်း ကိုးသောင်းလောက် ဖိတ်စင်စရာ အကြောင်းရှိတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက လေ့လာခန့်မှန်းထားတယ်။
အမေရိကန်သမတကြီး ထရမ့်ကလဲ သူ့တိုင်းပြည် စီးပွါးရေးတွေ ကို အရမ်းပြန်စချင်နေတာပေါ့။ မေလ ၈ ရက်နေ့က သူ့တွီတာအကောင့်ကနေ အခုလို တွီ့တယ်။
အမေရိကားက ဆိုင်တွေ ပြန်ဖွင့်ချင်တယ်။ ဆံပင်တွေ လဲ ညှပ်ဖို့လိုတာပဲလေ ။ဒီမိုကရက်တွေ က အနာခံ ပြီး မရင်းရဲ ကြဘူး။ ဒါ ကျုပ်တို့ ပေးရမယ့် အရင်းအနှီးပဲ။ အသက်ကြီးတဲ့ လူတချို့တော့ သေပေးရမှာပေါ့ ။ ဘုရားသခင် အလိုတော် ရှိတဲ့ အတိုင်းပဲ.. ရောင်းရင်းတို့ ....အမေရိကားကို လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ကြ။ တဲ့
ရန်ကုန်မှာလဲ နှာခေါင်းစည်း မပါရင် ဒဏ်ရိုက်မယ် လို့ ကြားရတယ်။ တချို့က မကြိုက်ဘူးထင်တယ်။ နှာခေါင်းစည်းတာရောဂါရှိတဲ့လူ မှ စည်းသင့်တာ ။ လူကောင်းတွေ စည်းဘို့မလိုဘူးဆိုတဲ့ အယူရှိတဲ့ အမေရိကန်တွေ အင်္ဂလိပ်တွေ မျက်နှာမစည်း နှာခေါင်းမစည်းခရီးသွားကြတယ်။ အဲဒီတော့ နှာခေါင်းနဲ့ ကိုဗစ်ကျည်ပွေ့ တွေ့လိုက်ကြတာပေါ့ ။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေ စမ်းသတ်နေတုန်း -နိုင်ငံရေးဆရာတွေ ငြင်းခုန်တုန်း အဆင့်မှာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတော့ နှာခေါင်းစည်းနဲ့ ခရီးသွားကြစေချင်တာပဲ ။ လန်ဒန်မှာ မြေအောက်ရထားကြပ်တာကို ရှောင်မရသလို ရန်ကုန်မှာ ဝိုင်ဘီအက်စ် ကြပ်တာလဲ ရှောင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ နှာခေါင်းစည်းပါရင် ရောဂါ ကူးစရာကိစ္စလဲ အကူးသက်သာတာပေါ့။ ရက်ကန်းသားက လုံးဝ မရဘူးလား ။ မဟုတ်သေးပါ ဘူး ။ ပေါ်လီဖိုင်ဘာသားတွေ မရနိုင် တဲ့နေရာ ။ မရနိုင် ခင် မတတ်နိုင်ကြခင် တနိုင်ချုပ်ကြ စည်းကြတာမျိုးကို လဲ တဖက်က အားပေးသင့်တယ်ထင် ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးရင် လက်နဲ့အုပ် ဆိုး။ မျက်နှာကို တခြား တဖက်လှည့်ချောင်းဆိုးတာမျိုးတောင် အထိုက်အလျောက် ရောဂါ ကို ကာကွယ်မှုပေးပါတယ်။ ယက်ကန်းသားလဲ အထပ်များရင် အထိုက်အလျောက်တော့ ဗိုင်းယပ်စ် တွေ လွှင့်စင်လာတာကို ကာကွယ်ထားမှာပါ။ မိုက်ခရို အပေါက်တွေ ဘယ်လောက်ကျယ်လို့ ဗိုင်းယပ်စ် ဘယ်နှစ်ကောင် ခုန်ထွက်လာမယ်ဆိုတာက အရမ်းမှန်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ပေါ်လီဖိုင်ဘာ မရရင် နှာခေါင်းမစည်းနိုင်တော့ဘူးလား ။ အခုထိလဲ ကိုဗစ် ပိုး က နှာရည်အစက်အမှုန်တွေနဲ့ မှ ရောပါနိုင် တာလား ။ လေထဲမှာသူ့ အလိုလိုလွှင့်မျောနေနိုင် တာလား သိပ္ပံဆရာများ -သုတေသီများ သုတေသနလုပ်တုန်း အငြင်းပွါးတုန်း အဆင့် ပါ ။ ဂျပန်က စမ်းသတ်ပြတဲ့ ဗွီဒီယို ဖိုင်လေးမှာတော့ နှာချေလိုက်ရင်လွှင့်ထွက် သွားတဲ့ အစက်အမှုန်လေးတွေကိုလိုက် ရိုက်ပြထားတာ အတော် ဝေးဝေးသွားတာ တွေ့မိတယ် ။ လွှင့်နေတာတွေကို ကြည့်ရပါတယ်။ နှာခေါင်းအအုပ်အကာနဲ့ချောင်းဆိုး ရင်တော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဗိုင်းယပ်စ်ကောင် ပါသွားတဲ့ အရေအတွက်နဲသွားမယ်ထင်ပါတယ်။ စံမှီ နှာခေါင်းစည်း တခု တပ်ပြီး ဖရောင်းတိုင်မီး ငြိမ်း မငြိမ်းစမ်းသတ်ပြတာမျိုးနဲ့လဲ ပညာပေးကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကိုဗစ် ကာလလွန်ရင်တော့လူတွေလဲ ဘာကိုမဆို သိပ္ပံနည်းကျ အတော်ချဥ်းကပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေရလာကြမယ် ထင်တယ်။ နှာခေါင်းစည်းနဲ့ နှာချေခြင်း စကားပြောခြင်းဟာ လည်ချောင်းထဲက ဗိုင်းယပ်စ်ကို အထွက်နဲစေမှာမို့ ( viral loading နဲရင်) လူ့ ဆီကို ဗိုင်းယပ်စ် အရောက်နဲ - အဝင်လဲ နဲ- လူက ခုခံအား ပိုကောင်းကောင်းနဲ့ခုခံနိုင်မယ်လို့ ခပ်ပိန်းပိန်းပဲ တွေးမိ ရင်း နှာခေါင်းစည်းခရီးသွားကြဘို့ လူထုကြီးကို အရင် ပညာပေးချင်ပါတယ်။
ခွန်ဆိုင်း ( ၁၂-၀၅-၂၀၂၀ )
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၄၁ Reviewed by MoeMaKa on 11:10 AM Rating: 5